Imifuno Iibhiskithi ezijikelezileyo
Ibhisikidi yethu ejikelezileyo yemifuno yenziwa ngomgubo we-organic ogqityiweyo, owenziwe ngomhlaba okhethwe ngononophelo ingqolowa yase-Australia, kunye nemifuno emininzi yezondlo. Ngezixhobo zokuqhubekeka phambili kunye nobuchwephesha obugqwesileyo be-oyile enebhasikithi enzima, iphantsi kumanqatha kwaye iphezulu kwi-calcium kunye nefomathi yesondlo izinto ezingafunekiyo. Ityebile ngezinto ezahlukeneyo ezifunwa ngumzimba womntu. Abathengi batsalwa ngumbala wayo omkhulu, ukunambitheka kunye nemifuno. Kwaye kulula ukuyiphatha kwaye uyigcinele iphakheji yayo encinci kwaye intle. Kwaye sinako ukuphuhlisa iincasa ezahlukeneyo zolu ngcelele ngokweemfuno zabathengi kunye neemarike.
Izithako (I-anyanisi ityuwa incasa):
umgubo wengqolowa (ingqolowa yase-Australia) (60%), iswekile egalelwe imbewu, ioyile yemifuno, iminqathe (5.1%), ukufinyeza, iswekile, ichives (2.2%), isame, isiraphu yemalt, imaltodextrin, isitatshi, iqanda, ityuwa, izongezo zokutya (isodiyam i-bicarbonate, i-phospholipids, i-dihydrogen phosphate disodium, i-beta carotene, i-sodium metabisulfite), igwele, iitumato (1.5%), itswele (1.3%), iseleri (0.8%), ikoriyander (0.8%), isipinatshi (0.5%), ibroccoli ( 0.5%), iklabishi yamaTshayina (0.5%), imifuno eluhlaza (0.4%), izinongo ezityiwayo.
Uhlobo lweMveliso: i-biscuit enzima
Ingcaciso: 90g * 30 iingxowa / CTNs
Package: Iingxowa zangaphakathi, iibhokisi zangaphandle. (Zijikeleze iibhokisi ezimalunga nama-900 kwibhokisi yeYGP engama-20.)
Ubomi beshelf: Iinyanga ezili-10
Ukugcinwa: Indawo epholileyo neyomileyo, thintela ukukhanya kwelanga ngqo okanye iindawo ezinomswakama.
Isatifikethi: HACCP, ISO9001: 2005
Iimpawu bhisikidi Imifuno ngeenxa zonke
Imifuno eyahlukeneyo ixutywe, izityebi kwizinto ezahlukeneyo ezifunwa ngumzimba womntu
Uyilo lokupakisha olulula, luhle ngakumbi
Egqithileyo Iibhiskiti zeCrispy
Okulandelayo: I-Hawthorn Lollipop
Iibhiskithi zaBantwana, Iipakethi zesosi yeSoy, Umtya weHawthorn, Intonga yeBhontshisi entsha, Ikhukhi yeLadyfinger, Ukutya amandongomane anetyuwa,